काठमाडौं – भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल भ्रमणमा रहँदा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू होटलमै पुगेर भेटेको विषय संसदमा उठेको छ ।
संसद बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङदेनले विदेशमन्त्रीलाई भेट्न पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू होटलमै पुग्नु गम्भीर विषय भएको बताए ।
विदेशमन्त्री जयशंकर काठमाडौंमा रहँदा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र डा. बाबुराम भट्टराई तथा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव उनलाई भेट्न होटलमै पुगेका थिए ।
उनले संसदमा प्रश्न गरे, ‘त्यसले के कुराको संकेत गर्छ ? यो चानचुने विषय होइन । यो व्यक्ति र पार्टीसित मात्रै सम्बन्धित विषय होइन । देशको अखण्डता, सार्वभौमिकता र नेपाली जनताको स्वाभिमानमाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।’